Radio Ergo | Ku saabsan Raadiyo Ergo
Ku saabsan Raadiyo Ergo
Raadiyo Ergo wuxuu maalin walba u baahiyaa bulshada ku hadasha afka Soomaaliga ee ku nool gobolka warar sugan oo bani’aadamnimo iyo macluumaad dhammaantood ku baxaya afka Soomaaliga. Macluumaadkaas wuxuu isugu jiraa kuwo ay soo ururiyaan weriyeyaal deegaannadooda kasoo warrama iyo soo-saareyaasha Raadiyo Ergo. Ujeeddadeennu waa inaan cod siinno bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed, abuurnana hab wanaagsan oo ay ula xiriiraan hay’adaha caalamiga ah ee arrimaha bani’aadamnimo ee doonaya inay iyaga caawiyaan. Waxaan dhegeysteyaasha u gudbinnaa xog iyo macluumaad muhiim u ah noloshooda si ay go’aanno xog-ogaalnimo leh uga gaaraan arrimaha noloshooda quseeya.
Macluumaadka uu Raadiyo Ergo baahiyo wuxuu la xiriiraa caafimaad, waxbarasho, magangelyo iyo ilaalin, beeraha iyo arrimaha xoolaha. Waxaan sidoo kale tabinnaa warar la xiriira arrimaha dumarka, dhallinyarada iyo shaqo la’aanta, ilaalinta deegaanka, dhaqanka iyo dowlad-wanaagga.
Waxaan ururrada bulshada rayidka ah iyo hay’adaha gargaarka kala shaqeynaa horumarinta hab waxtar leh oo farriimo iyo barnaamijyo lagu gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed. Sidaas oo ay tahay, Raadiyo Ergo wuu madax-bannaan yahay tifaftir ahaan.
Dhegeysteyaasha waxay maalin walba ka maqli karaan Raadiyo Ergo mowjadda gaaban ee 16ka Meter Band oo u dhiganta 17845 MHz iyo FM-da gobolka, saacaddu markay tahay 3:00 - 4:00pm xilliga Geeska Afrika lana mid ah (1200-1300 GMT). Hadafkeenna kowaad waa mawjadda gaaban maaddaama aysan jirin idaacad maxalli ah oo warar iyo macluumaad gaarsiin karta dhegeysteyaasha ballaaran ee jooga dhulka miyiga ah ee fog. Sidaas darteed mowjadda gaaban waa habka keliya ee macluumaadka lagu gaarsiin karo dhammaan dadweynaha Soomaaliya, iskuna xiri kara gobollada kala duwan. Barnaamijyada Raadiyo Ergo maalin walba waxaa kaloo laga sii daayaa tiro FM-yo maxalli ah oo aan wada-shaqeyn leennahay.
Ereyga –Ergo – wuxuu macno iyo qiimo weyn ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo afka Soomaaliga. Wuxuu xambaarsan yahay macnaha aasaaska dhexdhexaadinta ama ergeynta taasoo ay dani ugu jirto dadweynaha u baahan, iyo waxaa xataa loo celin karaa macno ahaan oo ay noqon kartaa kuwa u kaca inay xalliyaan iska hor imaadyada. Raadiyo Ergo waxaa maamula hay’adda aan faa’iido doonka aheyn ee International Media Support (IMS) oo fadhigeedu uu yahay Copenhagen. Xilligaan Raadiyo Ergo waxaa si ballaaran u maalgeliyay hay’adda horumarinta Swiss Development Cooperation (SDC), Hay’adda Qaxootiga ee Denmark oo taageero ka heleysa USAID-OFDA iyo hay’adaha gargaarka isku-dhafka ah ee Soomaaliya, Common Humanitarian Fund (CHF).
Noo soo dir wixii talo, tusaale, farriin iyo su’aalba ah adigoo noogu soo hagaajinaya: info@radioergo.org.